Kedu ihe bụ Kapiri Kaadị Cardarine: Uru 8 nke Cardarine | AASraw
/blog/Cardarine , GW 501516/Kedu ihe bụ Super Cardarine? / 8 Benefits Of Cardarine
Ihe na 03 / 05 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na Cardarine, GW 501516.
Kedu kaadị cardinine (GW 501516 ntụ ntụ)?
Cardinine ntụ ntụ, nke a makwaara dị ka GW 501516, bụ ọgwụ nyocha nke e mepụtara na 1990s iji gbochie ma gwọọ ọgwụ akwara na colon, prostate, na ara. Nnyocha ndị e mere na mbụ 2000s achọpụtawo na GW 501516 na ndị ọzọ na-aghara aghara PPAR enwewokwa ike ịkwụsị ọrịa ndị nwere ike ime ihe dị ka oke ibu na ọrịa shuga site na nkwupụta okwu kpọmkwem.
Ka nchọpụta gara n'ihu na-eto eto, ndị mmadụ na-ejide ngwa ngwa na GW 501516, na-akpọ ya "ntinye nkwalite mmechi nta."
Ọzọkwa, ikike Cardarine nwere ike ịgbachapụ anụ ahụ na-abaghị uru, mee ka mgbake dị elu, ma nwekwuo ntachi obi na-eme ka ngwaahịa a bụrụ ihe nlekọta nke ọ bụla na-eme egwuregwu na egwuregwu. PCT. Enweghị mmetụta ndị na-emerụ ahụ dị na 20 gara aga, ọ bụghị ihe ijuanya mere GW 501516 ji ghọọ akụkọ akụkọ banyere egwuregwu na egwuregwu. Ugbu a ka anyị lebakwuo anya.
Cardarine ntụ ntụ nkọwa
Kaadị Cardarine, bụ ụdị ìhè ọla edo edo edo. Dị ka ihe ọkụkụ nke Cardarine, nnukwu ntụ ntụ cardarine na-ewu ewu n'etiti ndị mmadụ, karịsịa elu dị ọcha Cardarine, enweghi mmetụta ndị ọzọ, mee ezi ahụ gị, nyere aka ida abụba.yeah, ma ọ bụrụ na m zụrụ Kardinine ntụ ntụ maka ire ere, ma ọ bụ ụlọ nyocha, ana m ahọrọ ịzụta kaadị Cardarine, họrọ a pụrụ ịdabere na Cardarine ntụ ntụ soplaya ma na-enwe mmekọrịta mmekọrịta.Details nke Cardarine nnukwu ntụ ntụ nkọwa na AAS dị ka:
Kedu Kaadị Powarine ji mee?
Kaadị powarine bụ ezigbo maka mara mma ihe niile! Ogologo ntachi obi na-erite uru na ya bụ ma eleghị anya ihe kachasị mkpa iji ngwaahịa a. Ọ bụghị naanị na egosiri na ị ga-enwekwu ntachi obi n'ọmụmụ sayensị, ma mgbe ị na-eji ya maka onwe gị, ị ga-ahụ na nsonaazụ ndị a abụghị ihe dị ịtụnanya! Ọ bụrụ na ị bụ cardio junkie ma ọ bụ dị ka ịnweta ụda, ọ na-eme ka oge ịgba ọsọ gị. A ga-agbatịkwuo oge ị ga-ebuli elu, ị ga-enwe mmetụta siri ike ma meecha rụọ ọrụ tupu ị na-apụ n'ụlọ mgbatị ahụ kwa ụbọchị.
O doro anya na ihe na-abaghị uru bụ n'elu ndepụta nke ihe mere ọtụtụ ndị ji hụ Kaadị Cardine. Mwakpo na veins na-achọpụta ihe ọzọ na njem ị na-eme ka ọ bụrụ ihe na-abaghị uru na-eme ka ọ dị mfe karị, na-enweghị mmetụta ọjọọ nke ọtụtụ ihe ọkụkụ na ọgwụ ọjọọ nwere ike inwe mgbe ha na-akụda ala. Mkpụrụ na-aba ụba site na Kaadị Powder bụ n'ihi nrịbawanye glucose na nsị ahụ. N'ikpeazụ, ị na-eji ihe oriri ndị na-eri kwa ụbọchị mee ihe n'ụzọ dị mma ma na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke carbohydrates ma ọ bụ abụba echekwara dịka anụ ahụ dị mma. N'ihi ya, cardarine abụghị nanị abụba na-ere ọkụ na mgbochi-catabolic, ma ọ dịkwa ntakịrị anabolic.
Kedu ka Ọrụ Ndabe Kaadị Cardin?
Kaadị Cardarine bụ maka Burnning Fat.
GW 501516 uzuzu bụ onye na-eme ihe na-eme ka onye ọ bụla na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ.
PPARδ bụ onye nyocha nke hormone nuklia nke na-achịkwa ọtụtụ n'ime usoro nhazi na ọrụ dị mkpa, gụnyere mmanụ metabolism bara uru.
Ndị na-arụ ọrụ PPARδ (ihe ndị na-eme ka PPARδ) rụọ ọrụ ọzọ ka ahụ anyị na-emefu ume site n'ịmepụta mmanụ aṅụ dịka mmanụ kachasị mma, ma ọ bụghị glucose sitere na carbohydrates.
Ị hụ, ahụ mmadụ nwere nhọrọ 3 iji gboo mkpa ya:
Glucose (Site na carbohydrates)
Acid Acids (Site na Ebufu Echetara)
Amino Acids (Site na Protein)
N'okpuru ọnọdụ ndị nkịtị, glucose bụ ike kachasị mma n'ihi na ọ dị mfe iji nweta ume karịa akwara abụba ma ọ bụ amino acids. N'ezie ahụ anaghị achọ protein dịka isi iyi ọkụ ma ọ bụrụ na ọ na-emegharị ka acid dị arọ maka ike mgbe glycogen (glucose echekwara) dị ala, dị ka ọ bụ mgbe ị nọ na steeti ọnụ.
Dịka onye na-arụ ọrụ PPARIX, ntụpọ GW 501516 nwere ike ịmaliteghachi ọrụ ahụ ka ịhọrọ akwara abụba dịka mmanụ ọkụ. Ọ dị mma ịhụ ihe mere ndị na-eji arụ ọrụ na ndị na-eme egwuregwu n'ebe ọ bụla na-eji ya eme ihe. Ọ bụ ya mere GW 501516 ji agba ọkụ abụba.
Ọ na-emekwa ka ntachi obi dịkwuo mma, mana mmetụta ndị ahụ nwere ike ọ gaghị adị ka ewu ọkụ.
Uru 8 nke Kaadị Cardarine
1) Kaadị Cardarine na-enyere aka ịkwụsị ibu
GW 501516 ntụ ntụ na-ebute PPARA, nke nwere ike ime ka mgbaba nke mmiri ara ehi na abụba na-eme ka ahụ sie ike. Nke a nwere ike inyere aka na-emeso ibu arọ. Ngwọta a nwere ike ịgba mbọ hụ abawanye ibu n'ihi iri nri. N'otu aka ahụ, GW 501516 na-ewepụ glucose mkpụrụ na imeju ma gbasaa insulin na-emetụta ụmụ oke. Site na ịmalite imezi ahụ ike na ụmụ oke, GW 501516 uzuzu na-eme ka nchedo pụọ na ụbụrụ.
2) Powder Cardarine Na - eme Ka Ọganihu Mkpụrụ na Mmiri
Mmalite nke PPAROR site na GW501516 na-eme ka ọganihu nke filaments muscle dị na ụmụ oke. A na - ejikọta filaments anụ ahụ na mkpochapụ ahụ. Ha nwere ike igba okpukpu abụọ nke ogologo oke ndị ọzọ, gosipụta na ọganihu dị mma.
3) Kaadị Powder Protects Brain
N'ime ihe ndị e kere eke, Kaadị Cardarine na-eme ka arịa dị iche iche jide n'aka mgbe ha nọ n'okpuru nchegbu oxydative. Ngosipụta nke PPAR site na Cardarine nwere ike ịkwalite ọganihu nke mkpụrụ ndụ akwara (R). Ozokwa, ọ na-atụ anya imebi ahụ, karịsịa na arịa ụbụrụ.
4) Kaadị Kaadị Cardinine Na-abara Obi
Cardarine Powder counteracts oxidative harm in the heart. Ọ na-ebelata ihe ize ndụ na ịdị njọ nke atherosclerosis (nrụpụta ihe edere na corridors) site na ngwá dị iche iche. GW 501516 ntụ ntụ na-amụbawanye nke nitric oxide, nke na-echebe megide atherosclerosis. Ọ na-eme ka ọ dịkwuo njọ na nhụsianya nke metụtara atherosclerosis na ụmụ oke. Glk 501516 na-ewuli ọgbọ VEGF site na mkpụrụ ndụ anụ ahụ mmadụ, nke na-ebute cell na vein development. Ihe na-eme Kaadị Cardinine pụta na mgbasawanye nke HDL cholesterol na ịmalite na triglycerides n'ime ihe ndị e kere eke, na-ebelata ihe ize ndụ nke ọrịa obi na-arịa ọrịa.
5) Kaadị Cadine Na-echebe Akụrụ
N'ime ụmụ oke, ọ dị ka igbochi iwe na mkpụrụ akụrụ ma nwee ike idozi ọrịa akụrụ. Ọ na-eme nke a site na iweda MCP-1 nkwonkwo nke dị na ya ma gbasaa n'ụzọ dị ukwuu n'ọrịa akụrụ dị otú ahụ.
6) Powder Cardarine Na-enyere usoro ntanetị aka
Gw 501516 ntụ ntụ nwere njikọ na nzochi iwe (R). Ejiri PPAR stifles irritation na imeju na ihe e kere eke site na igbochi ikike na-eme ka mmeghachi omume ọkụ (R). GW 501516 ntụ ntụ nwere ike imepụta PPAR nke ọta ọkpụkpụ akpụkpọ anụ nke na-enweta ọnyá nke a na-enweghị ike ịdaba n'ime usoro nhụgha ahụ. E gosiputara ya na ịmalite ịrịa ọrịa shuga.
7) Powder Cardarine Na-egbochi Mmebi Mmebi
Mmebe nke PPARA site na Cardarine Powder na-eme ka imeju gbanwee ike ya site na glucose ka abụba acids, si otú a na-ebelata glucose.N'ime ụmụ, GW 501516 ntụ ntụ na-ejide IL-6, nke nwere ike inye aka igbochi insulin protection in cells. N'ebe a ma ugbu a, ọ nwere ike imegharị na imeju imeju nke bụ n'ihi fructose dị elu na-eri calorie ole na ole. N'otu aka ahụ, ọ nwere ike ịmepụta ihe gbasara imeju na-abụghị nke anụ na ụmụ oke.
8) Kaadị Powder Can Help Heal Skin Diseases
Usoro nke PPAR nwere ike ime ka psoriasis (mbipụta akpụkpọ ahụ) dịkwuo njọ.
Chọpụta ihe kacha amasị gị:
GW 501516 / Cardarine Basic information 9 ihe ị chọrọ ịma banyere Cardarine ntụ ntụ !!! Gini mere anyi ji azuta LGD-4033 / VK5211 / Ligandrol powder from AASraw? 9 ihe ị chọrọ ịma banyere Cardarine ntụ ntụ !!!
Tags: ịzụta kaadị Cardarine, zụta uzuzu GW 501516, kaadị cardinine, GW 501516 ntụ ntụ
Ịzụta àgwà dị mma Sarms GW 501516 (Cardarine) ntụ ntụ na weebụ
Zụta Masteron Propionate ntụ ntụ maka bodybuilding: 6 eziokwu ị kwesịrị ịma !!!	Zụrụ elu dị ọcha Tadalafil ntụ ntụ online: Ihe niile ị kwesịrị ịma !!!
Nandrolone laurate ntụ ntụ
Mkpuru osisi Drospirenone (67392-87-4)